Vaovao - Fampiharana sokay haingana
Ny QUICKLIME dia novokarina avy tamin'ny vatosokay misy fifangaroan'ny kalsioma sy magnesium carbonates.
Na ny quicklime avo amin'ny kalsioma na ny quicklime dolomitika dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fametrahana vatosokay vita amin'ny vatosoa ao anaty lafaoro hatramin'ny hafanana 900 degre. Ity dingana ity dia antsoina hoe fizotran'ny fanaovana kajy.
Ireo vokatra haingana dia matetika nanjary hery tsara nantsoina hoe PULVERIZED QUICKLIME izay mety indrindra amin'ny fifangaroana amin'ny additives na fitaovana hafa ka miteraka fitambarana mifangaro mifangaro. Noho ny toetran'ny simika amin'ny zavatra ampiana sasany, ny quicklime dia mety ho lasa "Fluidized", izany hoe manana fananana be ranoka be. Ny quicklime haingana be dia be dia tsara raha ampiasaina amin'ny rafitra fikirakirana fitaovana manokana ho an'ny fivezivezena tsara indrindra ary hialana amin'ny fanakanana.
Quicklime dia azo alaina amin'ny rano ihany koa, amin'ny dingana iray antsoina matetika hoe mihena, ka miteraka HYDRATED QUICKLIME (na calcium hydroxide), vokatra vovo-dronono maimaimpoana maina izay azo ampiharina sy mahomby amin'ny fampiasana maro.
Izy io koa dia azo ampiasaina ho toy ny reagents analytics, reagent fanadihadiana spektral, mekanisma phosfor. Solvent mpanampy, solika mampihena ny menaka legioma, famakafakana entona, ampiasaina amin'ny mpitroka gazy karbonika. Reagents be mpampiasa amin'ny famokarana semiconductor ny denotation, ary ny fizarana diffusion.
1) Ampiasao amin'ny karazana feed additive calcareous be dia be mahatratra 55,6 etsy ambony fa tsy mahatezitra ireo mpamorona ny
2) Miaraka amin'ny fanaovana ny zavamaniry plastika, ny ozinina vita amin'ny fingotra, ny ozinina manarona, ny trano fivarotana tsy misy rano ary ny loko sy ny rindrina anatiny sy ivelany dia fotsy. Albedo ambonin'ny 85 degre.
3) Fampiasana amin'ny fanaovana buckles ny tabilao, latsaka ao anaty rano ny fantsona, ny indostrian'ny simika. Albedo ambonin'ny 93 degre.
4) Mety ampiasaina amin'ny vatan'ny paty nify, ny savony. Albedo amin'ny diplaoma 94 ambony
5) Mampiasa amin'ny fingotra, ny plastika, ny tariby elektrika, ny pvc albedo amin'ny diplaoma 94 ambonin'ny
6) Pvc, PE, ny loko, ny vokatra haavon'ny firakotra, ny ambany papermaking ambany miely, ny papermaking ambonin'ny miely, albedo ambonin'ny 95 degre. Manana, ny albedo avo, tsy misy poizina, ny tsy fahampian-tsakafo, ny menaka manify ho ambany fahadiovana avo lenta, ambany ny haavon'ny hamafiny.
Kalsioma oksida sy kalsioma Hydroxide, Manao Hydroxide Kalsioma, Anaran'ny varotra calcium oxide, Fitaovana Hydroxide Kalsioma, Fitaovana famokarana kalsioma Hydroxide, Famoronana Hydroxide Kalsioma,